မွန်ဂစ်တာ သမား တွေ သင်မယ့် ဂစ်တာတီးသင်တန်း
Feature August 25, 2016
ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဟင်္သာမီဒီယာရဲ့ အနုပညာကဏ္ဍမှာတော့ ဂစ်တာပညာသင်ကြားလိုသူတွေအတွက် မွန်ဂီတသမားတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဂစ်တာသင်တန်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ မွန် ဂီတသမား တွေဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင် သူရိယမာဉ်၊ Star ၊ ဝဏ္ဏ နှင့် ဂစ်တာသမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ထောရော့ဒ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့က စတင်လို့ မော်လမြိုင်နှင့်...
Feature March 26, 2017
ယက္ခဒီပဒေသဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည့် ဘီလူးကျွန်းကြီးပေါ်တွင် အမှီသဟဲပြုပြီး လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသော ဦးမန်ငွေဝင်းတစ်ယောက် တောင်ဝှေးကို အချောကိုင်ရင် တက်ကြွနေဟန်ဖြင့် “တံတားကြီးပြီးတာနဲ့ ငါ့ပစ္စည်းတွေလည်း နိုင်ငံခြားရောက်ပြီပဲ”ဟု ပြောပြီး သူလုပ်နေသော တောင်ဝှေး အချောကိုင်ခြင်းကို အရှိန်မြင့်လိုက်သည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ အထမြောက်တော့မည်ဖြစ်၍ ဝမ်းသာနေခြင်းကိုလည်း ပြုံးရွှင်နေသောမျက်နှာထားက အတိုင်းသားဖော်ပြနေသည်။ ဘီလူးကျွန်းဒေသ ချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ...
နေအလင်းရောင်ခြည် အစပြုချိန် မြူနှင်းများ ပြိုကျနေသည်ကြားမှ နီရဲနေသော လူအုပ်ကြီးက သံစုံတီးဝိုင်းနှင့် ချီတက်လာပြီးဖြစ်သည်။ နေရာင်ခြည် ပွင့်လာသည်နှင့်အတူ ပြန်လွင့်နေသည့် ဟင်္သာအလံသည်လည်း ထင်ရှားလာပြီးဖြစ်သည်။ မွန်လူမျိုးတို့၏ နှလုံးသားထဲတွင် ကိန်းဝပ်နေပြီးဖြစ်သော မွန်အမျိုးသားနေ့ကို မွန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ နေထိုင်ရာ အရပ်ဒေသများတွင် ဟံသာဝတီ မြို့ပြနိုင်ငံတော်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် တပို့တွဲ...
Feature May 24, 2016
အစိုးရအကောင်အထည်ဖော်မည့် စီမံကိန်းများ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများဝင်ရောက်လာမည်ဟူသော ခန့်မှန်းချက် များနှင့် မြေများ ကို ဝယ်ယူရောင်းချခဲ့ရာမှ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း၌ ပြီးခဲ့သော်နှစ်များအတွင်း အိမ်ခြံမြေဈေးများ အဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ရသည်။ ချောင်းဆုံမြို့နယ်နှင့် မော်လမြိုင်မြို့များအကြား တံတားထိုးမည့် စီမံကိန်းမပေါ်ပေါက်ခင်က ချောင်းဆုံမြို့ရှိ ပေ ၄၀၊ပေ ၆၀ မြေတစ်ကွက်၏ ပေါက်ဈေးမှာ ကျပ်သိန်း ၄၀ ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်...
မော်လမြိုင် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန် ပျက်ရသော အခြေခံ သုံးချက်
Feature April 25, 2018
မွန်ပြည်နယ်၏ မော်လမြိုင် သင်္ကြန်မှာ လမ်းလျှောက် သင်္ကြန်ထည့်သွင်း ကျင်းပသွားမည်ဟု မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ရက်အနည်းငယ် အလိုတွင် အကြီးအကျယ် ကြုံးဝါး ပြောဆိုခဲ့၏။သို့သော် အမှန်တကယ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့ မရှိ။ လမ်းလျှောက် သင်္ကြန် ပျက်ရခြင်းသည် ပြည်သူများ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု အားနည်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟု မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ...
Feature March 29, 2017
နှစ်လွှာပေါင်းလျှင် တစ်ရွက်ဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်၊ နှစ်ဖွဲ့၊ နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းလျှင် တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။ မွန်နိုင်ငံရေးမူကား နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းလျှင် တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ရမည့်အစား သုံးဖွဲ့ဖြစ်လာမည့် အခြေအနေသို့ ဦးတည် နေချေသည်။ မွန်အမျိုးသားပါတီနှင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေရာမှ မူလ နှစ်ပါတီအပြင် နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးပါတီသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်ရန် ဦးတည်နေခြင်း...
Feature November 23, 2016
မော်လမြိုင်မြို့က အဘွားအိုတစ်ဦးသည် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီက ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် တွေ့ရှိသူများက အကြောင်းကြားပေးရန် အဖွားအို၏ ဓာတ်ပုံနှင့် မိသားစုဝင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များသည် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် အဖွာအိုပျောက်ဆုံးပြီး မကြာမီအချိန်အတွင်း ပျံနှံ့ခဲ့သည်။ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် အဖွားအိုတစ်ဦး နေအိမ်မှ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ပျံနှံခဲ့ပြီးနောက်...
အရပ်ကကူ လွှတ်တော်၊ အစိုးရကပါ ဝိုင်းရတဲ့ မီးလင်းရေး ကော်မီတီရဲ့ အရှူပ်တော်ပုံများ
ခေတ်သစ် ကမ္ဘာ၌ လျှပ်စစ်မီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ တိုးတက်လိအပ် လာနေသည်မှာ မြင်သာသည့် ပြသနာရပ် ဖြစ်လာပြီး လူတဦးချင်းစီမှ စ၍ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အဆုံးပင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိအောင် ကြိုးပမ်း နေကြ ပေသည်။ မြို့ပြ အဆောက် အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးမှု...
ဒုတိယမြောက် ဒီမိုကရေစီသက်တမ်း အစပျိုးရာ ၂ဝ၁၆ ခု နှစ်မတ်လမှစပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော NLD အစိုးရအဖွဲ့က အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် ဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်မှာ မကြာမီရက်ပိုင်းကပင် တစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အစိုးရသစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီး မဖွဲ့စည်းမီ ဒီချုပ်လွှမ်းမိုးသည့် လွှတ်တော် အသီးသီးပေါ်လာသည့် အချိန်ကတည်းက...